Uhlu Lwezinsiza kanye neKhwotheshini
Ibhodlela elenziwa ngesandla
Ngesandla faka ibhodlela kusiphathi sebhodlela esingenalutho
Umgcini webhodlela ungene ngaphakathi nangakwesobunxele ngaphandle
GF16 / 5 Rotary Piston Ukugcwalisa kanye Capping Machine
16-ikhanda piston ukugcwaliswa umshini; 5-ikhanda capping operation.
Uhlobo lwesilinda olulenga, i-cam drive, isakhiwo esihlanganisiwe se-cylinder valve yamazwe omhlaba
Phakamisa ngokuzenzakalela izigqoko zebhodlela ku-cap sorter
Yenziwe ngensimbi engagqwali engu-304 nenjoloba ethambile
Hlela ngokuzenzakalela isembozo
Le divayisi yokuklama yenzelwe ngokukhethekile amabhodlela amise okhethekile okhilimu we-shampoo. Amanye amadivayisi wokuqhafaza awakwazi ukutholakala.
Ithrekhi lekhava le-Belt
Okuzenzakalelayo cap yokudla umshini
Ukudlulisa umnikazi webhodlela
Ukubhotela ibhodlela nomshini owonakalisayo
1. Ngesandla gqoka ophethe ibhodlela elishintshayo.
Lo mshini ulula ukufaka ibhodlela elingenalutho kusiphathi sebhodlela esingenalutho ngesandla, bese uqedela inqubo yokulayisha ibhodlela lencwadi.
Amandla: amabhodlela ayi-25,000 / ihora
Ububanzi Turntable: 1000mm
Ubukhulu: 1000X1000X9500 (mm)
Leli bhande elihambayo lenziwe ngezinto ze-SUS304 zawo wonke amabhodi wokuhambisa, ahlangabezana ngokugcwele nezidingo zenhlanzeko. Ipuleti leketanga elihambayo lenziwe ngopulasitiki wobunjiniyela, owaziwa kakhulu ngokuthi insimbi yepulasitiki, emelana nokugqokwa ngaphandle kokulimaza ibhodlela.
3. 16/5 Umshini wokugcwalisa i-Rotary piston nomshini wokubhala
Lo mshini wokukodwa unikezelwe ekugcwaliseni nasekubhaleni izinto eziphezulu ze-viscosity ezifana ne-shampoo, i-shampoo, i-lotion yomzimba, i-conditioner, uju, amasoso, njll., Ngoba le nto inokuswelakala okuncane, kufanele ingezwe Umshini ingagcwaliswa kuphela ngengcindezi, ngakho-ke lo mshini usebenzisa indlela yokugcwalisa i-piston kanye nohlobo lwe-rotary eguquliwe yokulenga, engakwazi ukuhlangabezana ngokugcwele nezidingo zokugcwaliswa kwezinto eziphezulu ze-viscosity nge-viscosity ephezulu. Ukuze unciphise ukungcola kwesibili, umshini usebenzisa ikepisi lokugcwalisa- Kuthuthukise kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza, kuhlangabezana nezidingo zokudla kanye nekhemikhali yansuku zonke ye-GMP, futhi kulula kakhulu ukunakekelwa okulandelayo nokuhlanzwa. Lo mshini we-piston cylinder ne-valve zamukela isilinda esithuthukile kanye nesakhiwo esihlanganisiwe se-valve, esinganqobi kuphela impilo yesevisi emfushane ye-valve nokucubungula Futhi ubunzima bokufakwa, izindleko zokulungisa eziphakeme, uphawu oluqinile, ukuhlanzwa okungalungile nokunye ukukhubazeka, kepha futhi kuthuthukisa kakhulu ukugcwalisa ukunemba nokulula kokuhlanza; isakhiwo semilinda esihlanganisiwe nomshini we-valve njengamanje ungowamazwe aphesheya Onesisombululo sekhona esithuthukile futhi esivuthiwe; kungumshini ofanele wokukhiqiza wamabhizinisi amaningi wokukhiqiza.
Amandla omshini: 3KW
Ukugcwalisa amakhanda: 16
Inani lamakhanda wokuqongelela: 5
Ukusebenza kwesiqukathi okucacisiwe:
Imininingwane yekhava esebenzayo:
Okukhipha: 2500P / h
Usayizi ophelele: 2300x2150x2300mm
4. Umshini wokuvala ikepisi ozenzakalelayo
Lo mshini wokuqhafaza wenzelwe ngokukhethekile ukubekwa kwamabhodlela amise okhethekile anezimo ezikhethekile zemboni yamakhemikhali yansuku zonke. Lo mshini uyinkimbinkimbi kakhulu kunemishini ejwayelekile yokuthwebula. Kusetshenziswa ukwakheka kwekepisi, kwaklanywa amapuleti esiteshi ahambelana nawo. Ipani langaphandle lizungeza ngasikhathi sinye, bese lidudula isembozo kwisikhunta esihambisanayo se-lid concave esiteshini somsebenzi. Ekugcineni, isembozo simunca ngamunye ngamunye ngebhande le-vacuum ehambisanayo, sidonswe kuthrekhi yokudla, bese ibhodlela lithunyelwa emshinini wokudla udla ugqoko bese uqeda umsebenzi.
5. Ukubhotela ibhodlela nomshini owonakalisayo
Lo mshini wenzelwe ngokukhethekile umugqa wokukhiqiza wamabhodlela amile nabanikazi bamabhodlela. Amabhodlela agcwalisiwe futhi ahlanganisiwe akhishwa kubanikazi bamabhodlela. Amabhodlela aqale abhajwe, abanikazi bamabhodlela bawa ngokuzenzakalela ngenxa yamandla adonsela phansi, bese bebuyela kubanikazi bamabhodlela.
Ubukhulu: 1600 * 850 * 1100
6. Ipulatifomu yokupakisha yokufakelwa
Le nkundla yenziwa ngayo yonke insimbi engagqwali futhi ihlangabezana nezidingo ze-GMP.
7. Umnikazi wamabhodlela
Umnikazi webhodlela unemisebenzi emibili. Enye ukusiza amabhodlela abunjwe ngokungajwayelekile okulula ukuwathela amabhodlela ebhande lokuhambisa. Okwesibili ukuhlanganisa amabhodlela wezincazelo nezinhlobonhlobo eziningi, okuvumela amabhodlela ukuthi angene kumnikazi wamabhodlela. Umshini wokugcwalisa nokufaka unobude obufanayo, futhi itreyi lokuphakela ibhodlela elihambelanayo nalo lihlanganisiwe. Noma ngabe umhlahlandlela wokudla ngamabhodlela, itreyi lokuphakela ibhodlela, ukuphakama komshini wokugcwalisa, noma ukuphakama komshini wokufaka, asikho isidingo sokukuguqula. Akugcini nje ukunciphisa umthwalo womsebenzi wabasebenzi lapho befaka ibhodlela elithile, futhi kuthuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza, kepha futhi umshini owodwa usebenza ngezinhloso eziningi, futhi ukucaciswa okuningi kungasetshenziswa, okunciphisa kakhulu izindleko zokuthengwa kwemishini yamabhizinisi wokukhiqiza.
Langaphambilini Semi-othomathikhi tube ukugcwaliswa futhi uphawu umshini
Olandelayo: Umshini Wokugcwalisa Ukushisa Kwangaphakathi Wokufaka Tube